Afrika, 16 June 2019
Axad 16 June 2019
Kenya: Rag ku dhintay qaraxa miino ay aasayeen
Saddex qof oo loo malaynayo inay ka tirsanaayeen Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Kenya ayaa geeriyooday kadib markii maalintii Khamiista ay la qaraxday Miino ay ku aasayeen jidka deegaanka keynta ah ee Boni ee ka tirsan Ismaamulka Lamu ee dalka Kenya.
Cudurka Ebola oo ka dillaacay dalka Uganda
Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalka Uganda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegey in wiil yar oo shan jir ahaa uu maanta u dhintay cudurka Ebola, kaas oo maalmo ka hor laga helay cudurkaasi.
Raadka Xadka Xiran ee Lamu, Kenya
Deegaanada Lamu Ilaa Malindi ee dalka Kenya ayaa ganacsi ahaan ku tiirsan baddeecadaha qiimaha jaban ee kasoo talaaba xadka Somalia ee badda iyo barigaba.
Kenya oo xirtay xadka Soomaaliya ee dhanka Lamu
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xirtay xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Ismamaulka Lamu, waxayna sheegtay inaysan jirin cid ka soo gudbi karta xadka Kayuunga iyo Raaskaambooni.
Ku dhawaad boqol qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taalla bartamaha dalka Mali Isniintii, sida ay sheegeen mas'uuliyiin.